Nationalisation – Repoblika II: gaboraraka ny fitantanana | NewsMada
Nationalisation – Repoblika II: gaboraraka ny fitantanana
Raha tsiahivina ny tantara, natanjaka ny toekarena malagasy tamin’ny Repobila voalohany (1960-1972). Nisy indostria maro tamin’ny faritany rehetra teto amin’ny Nosy, ohatra, ny faritanin’Antananarivo ao anatiny Antsirabe, nahitana indostria 54 ; Toamasina, 6 ; Diego-Suarez, 5; Fianarantsoa, 3. Nahitana indostria avokoa ny faritany rehetra teto amin’ny Nosy. Natanjaka avokoa ireo, betsaka ny nanodina ny vokatry ny fambolena, nitondra 10 % tamin’ny harinkarena faobe. 1972-1975, nandritra ny governemanta Jeneraly Ramanantsoa, nomena vahana ny indostria hamokatra izay nilaina teto an-toerana, nitondra 15 % tamin’ny harinkarena faobe.
Ny taona 1975, Repoblika faharoa nitondran’ny filoha Ratsiraka Didier, nanomboka teo, sempotra ny toekarem-pirenena rehefa noraisin’ny fanjakana an-tanana ny fitantanana na “nationalization” ireo indostria sy orinasa maro teo aloha. Tsy ny politika no ratsy fa ny fitantanana no gaboraraka. Ohatra roa lehibe : tsy tafarina hatramin’izao ny Jirama (EEM* tamin’ny Repobika voalohany), potika tanteraka ny Solima (Solitany malagasy). Tamin’ny Repoblika faharoa ihany, nisy ilay hoe “investissement à outrance”, nananganana karazana orinasam-panjakana (fanaovana menaka, zezika…), nefa tsy hita izay vokany, nikatona avokoa taty aoriana.
Tsy fahombiazana tanteraka ny fitondrana sosialista nitantanana ny raharaham-pirenena amin’ny ankapobeny, taona 1975-1990. Nalahatry ny sampandraharahan’ny firenena mikambana momba ny fampandrosoana (Pnud) latsaka anatin’ny fahantrana i Madagasikara, faha-150 amin’ny firenena 177. Nidina 36,8 % ny fahefa-mividin’ny mponina teo anelanelan’ny taona 1960 sy 1990, nihena 50 % ny fanjifana. 70 % ny vahoaka tao anatin’ny fahantrana. Ireo krizy ara-toekarena ireo no niteraka krizy politika fanonganam-panjakana tamin’ny 1991.
EEM* : Eau et Electricité de Madagascar